(TOS) Usoro ọrụ ⋆ Sugarlove ™
Ọrụ a bụ maka ndị okenye naanị (ị ghaghị ịdịkarịa ala 18 afọ).
Ọrụ saịtị anyị bụ Sugarlove bụ ụzọ maka ndị okenye iji zute onwe ha n'ịntanetị.
Nke a bụ nkwekọrịta iwu kwadoro ("Nkwekọrịta") n'etiti gị na saịtị anyị. Biko gụọ nkwekọrịta ahụ nke ọma tupu ịdebanye aha maka ọrụ saịtị anyị. Site na ịdenye aha maka Sugarlove, ị bụrụ onye otu (Ọrụ “Member”), ị kwenyere na iwu na ọnọdụ nke nkwekọrịta a (“Okwu”) ga-achịkwa gị ma ọ bụrụhaala na ị ga-abụ onye otu. Ọ bụrụ na ikwenyeghi na Usoro ndị ahụ, enyeghị gị ikike iji ọrụ Sugarlove.
Sugarlove gbanwere usoro ndị a n'oge ọ bụla, na-enweghị amamọkwa, na-arụ ọrụ mgbe ebenye njikọ njikọ otu na weebụsaịtị anyị (https://www.sugarlove.one). Obere obere (n'okpuru afọ 18) nwere ike ọ gaghị abụ ndị otu. Mgbe ị debanyere aha, na site n'oge ruo n'oge, Sugarlove ga-achọ ka ịnye ozi zuru ezu iji gosipụta na ị dịkarịa ala 18 afọ. Site na ị bụrụ onye otu, ị na-anọchi anya ma nye gị ikike na ị dịkarịa ala afọ 18.
Gị ma ọ bụ Sugarlove nwere ike ịkwụsị inwe otu nnọkọ Sugarlove n'oge ọ bụla, maka ebumnuche ọ bụla, na-adị irè mgbe izipu ozi ederede na ndị ọzọ. Sugarlove nwere ikike ịkwụsị ma ọ bụ kwụsịtụ ohere ịbanye na ọrụ Sugarlove, na-enweghị ọkwa, na ngabiga ọ bụla nke nkwekọrịta a nke ị na-ewebara gị na Sugarlove.
Otu gị n’ọrụ Sugarlove bụ maka ọdịmma nke gị. Maynweghị ike inye ndị ọzọ ikike iji otu gị, ịgaghị ekenye ma ọ bụ bufee ụzọ akaụntụ ọzọ n'aka onye ọzọ ma ọ bụ ihe ọzọ.
Ntaneti / Igwefoto
Dị ka onye òtù, ị kwenyere na:
You bụ naanị maka ọdịnaya ma ọ bụ ozi ị bipụtara ma ọ bụ gosipụta (nke a, “post”) na ọrụ Sugarlove, ma ọ bụ bufere na ndị ọzọ so na Sugarlove.
Onweghi nnagide maka ihe ijuanya. I ghaghi biputere na ọrụ Sugarlove, ma ọ bụ zigara ndị ọzọ nọ na Sugarlove ma ọ bụ ndị ọrụ, mmejọ ọ bụla, ezighi ezi, mkparị, okwu rụrụ arụ, mkparị, inwe mmekọahụ, iyi egwu, iyi egwu, agbụrụ agbụrụ, ma ọ bụ ihe iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ ihe ọ bụla mebiri emebi. ma ọ bụ na-emebi ikike ndị ọzọ (gụnyere, mana ọnweghị oke, ikike ikike ọgụgụ isi, na ikike nke nzuzo na ịkọ ọhaneze).
Will ga-eji ọrụ Sugarlove mee ihe n'ụzọ kwekọrọ n'iwu na ụkpụrụ niile. Yougaghị etinye nọmba ekwentị, adreesị okporo ụzọ, aha ikpeazụ, URL, adreesị E-mail, mkparị mkparị ma ọ bụ ntụaka mmekọahụ, ma ọ bụ okwu mkparị ma ọ bụ okwu mkparị, ma ị ga-edepughi foto ọ bụla nwere ihe ọtọ ma ọ bụ ozi nke onwe gị. . Sugarlove nwere ikike, mana enweghị ọrụ ọ bụla, ịjụ profaịlụ ma ọ bụ foto ọ bụla na-esoghị mmachibido ndị a.
Willgaghị etinye aka na mgbasa ozi na, ma ọ bụ arịrịọ nke ndị otu ndị ọzọ iji zụta ma ọ bụ ree ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla site na Ọrụ ahụ. Will gaghị ebugharị akwụkwọ ozi yinye ọ bụla ma ọ bụ E-mail ndị zigara ndị ọzọ so na Sugarlove.
Ị gaghị eziga, kesaa ma ọ bụ mụta n'ụzọ ọ bụla ihe ọ bụla nwebisiinka, ụghalaahia, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na-ezighị ezi ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ikikere ederede nke onye nwe ikike dị otú ahụ.
Ọ bụ naanị ọrụ gị maka mmekọrịta gị na ndị otu ndị ọzọ so na Sugarlove. Sugarlove nwere ikike, mana enweghị ọrụ ọ bụla, ilebanye anya n’etiti gị na ndị otu gị. Mkpuchi ọ bụla nwere ike ibute ọgwụgwọ ịgba n'aha Sugarlove
Enweghi ike site n'aka Onye
Will ga-agbachitere, kwusi, ma jide Sugarlove na-enweghị mmerụ ahụ, ndị ọrụ ya, ndị isi ya, ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya na ndị ọzọ maka ọghọm ọ bụla, ụgwọ ọrụ, ụgwọ na mmefu (gụnyere ego ndị ọka iwu nwere ezi uche) gbasara ma ọ bụ ibilite na ojiji nke Sugarlove. Serviceluding, mana ọnweghị oke, nkwekọrịta ọ bụla nke gị nke usoro nkwekọrịta a.
Echiche, ndụmọdụ, nkwupụta, onyinye, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ọdịnaya enyere na ọrụ Sugarlove bụ nke ndị edemede ha abụghị nke Sugarlove, ekwesighi ịdabere na ya. Ndị edemede dị otú a bụ naanị ndị ọrụ maka ụdị ọdịnaya a. Sugarlove anaghị ekwe nkwa ido anya, izu ezu, ma ọ bụ uru nke ozi ọ bụla na Ọrụ ahụ, ma nkwanye ma ọ bụ na-akwado ma ọ bụ na-ahụ maka izizi ma ọ bụ ntụkwasị obi nke echiche ọ bụla, ndụmọdụ ma ọ bụ nkwupụta emere. Ọnweghị ọnọdụ ọ bụla ga-akpata Sugarlove maka mbibi ọ bụla ma ọ bụ mmebi ọ bụla na-esite na onye ọ bụla dabere na ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ edepụtara na Ọrụ Sugarlove, ma ọ bụ zigara ndị otu Sugarlove.
NDỌ AKA NA NT P: LEGOD:: Ọ ga - ekwe omume na ndị otu Sugarlove ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ (gụnyere ndị ọrụ na - enyeghị ikike, ma ọ bụ "ndị na - eme ya") nwere ike bipute ma ọ bụ bufee ihe na - adịghị mma na ọrụ Sugarlove yana ị nwere ike kpughee ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe arụ. Ọ ga-ekwekwa ndị ọzọ ịnweta ozi gbasara gị maka ojiji nke Ọrụ ahụ, yana onye nnata nwere ike iji ụdị ozi ahụ na-amaja ma ọ bụ merụọ gị ahụ. Sugarlove abụghị maka iji ozi nkeonwe gị ị nwere ike ịhọrọ igosipụta na Ọrụ ahụ. Biko jiri nwayọ họrọ ụdị ozi izipu na ọrụ Sugarlove ma ọ bụ hapụ ndị ọzọ.
Sugarlove nwere ikike, mana enweghị ọrụ ọ bụla, inyocha ihe edepụtara na mpaghara ọha nke Ọrụ Sugarlove. Sugarlove ga-enwe ikike iwepu ụdị ihe ọ bụla na-emebi, ma ọ bụ na-ekwu na ọ na-emebi, iwu, ma ọ bụ nkwekọrịta a. Na agbanyeghị ikike a nke Sugarlove, ị ga-akwụ naanị ụgwọ maka ọdịnaya nke ihe ịdebere na mpaghara ọha nke Ọrụ yana ozi email nkeonwe gị. Ozi ịntanetị ezigara n’etiti gị na ndị otu ndị ọzọ nọ na Sugarlove na-enweghị ike inweta ọha na eze ga-elebara onwe ha anya dịka iwu nke iwu siri dị.
Mwepụ nke Ozi
Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike inyocha ozi ọ bụla ndị ọrụ nke ọrụ ahụ na-eziga, ọ bụghịkwa maka ọdịnaya ọ bụla nke ozi ndị a, anyị debere ikike, ma ọ bụghị iwu, iji kpochapụ ma ọ bụ bugharịa ọdịnaya gụnyere enweghị profaịlụ, ozi ọha na eze na ozi, na anyị, naanị anyị nwere ezi uche, na-achọ imebi koodu omume nke akọwapụrụ n'elu ma ọ bụ ndụmọdụ ọ bụla metụtara ọdịnaya, ma ọ bụ ka ekwetaghị ya. Ị ga-anọgide na-ahụ maka ọdịnaya nke profaịlụ, ọkwa ọha na eze na ozi ị nwere ike ịnye ma ọ bụ dekọọ na Ọrụ ma ọ bụ zigara ndị ọrụ nke Ọrụ ahụ.
Sugarlove nwere ma nwekwaa ikike ndi ọzọ. Ọrụ ahụ nwere ihe nwebiisinka, ụghalaahịa, na ihe ọzọ ndị ọzọ gbasara Sugarlove na ndị nyere ya ikike. Na mgbakwunye, ndị otu ndị ọzọ nwere ike biputere ozi nwebisiinka, nke nwere nchedo nwebisiinka ma akọwapụtaghị ya dị ka nwebiisinka Ewezuga ozi nke dị na ngalaba ọhaneze ma ọ bụ nke enyere gị ikike, ị gaghị e copyomi, gbanwee, kesaa, kesaa, kesaa, igosi ma ọ bụ ree ụdị ozi ala ọzọ ahụ.
Site na-ezipụ ozi ma ọ bụ ọdịnaya na Sugarlove ọhaneze, ị na-enye nkwado na-akpaghị aka, ị na-anọchi anya ma na-ekwenyesi ike na ị nwere ikike inye, nye ndị Sugarlove na ndị otu ndị ọzọ Sugarlove akwụkwọ ikike, na-adịgide adịgide, na-anaghị ekewa, ikike zuru ụwa ọnụ. iji, detuo, ịrụ ọrụ, gosipụta ma kesaa ụdịrị ozi na ọdịnaya ya na ịkwadebe ọrụ ndị sitere na, ma ọ bụ itinye ọrụ ndị ọzọ, ụdị ozi na ọdịnaya dị, na inye ma nye ikike nke ihe ndị dị n'elu.
Ozi Ndị Nyere
Ewezuga dịka enyere na iwu nzuzo nke Sugarlove, Sugarlove ga-edobe ozi niile enyere gị na Sugarloveluding nọmba kaadị akwụmụgwọ, ma ga - eji ma ọ bụ gosipụta ozi dị na naanị maka ebumnuche nke anakọtara ozi dị otú ahụ, ma ọ bụ dịka iwu chọrọ. .
Ọnụ ego na ụgwọ ụgwọ
Ajuju ma ọ bụ esemokwu banyere ịgba ụgwọ, ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ga-adọrọ gị na onye na-ahụ maka ọrụ ekwentị gị nke atọ.
Nkwenye nke akwụkwọ ikike
Sugarlove na-enye ọrụ Sugarlove na “dị ka ọ dị” ma na-enye nkwado ọ bụla maka ụdị ọ bụla, ekwupụta, gosipụtara, iwu, na njikọ ya ma ọ bụ na njikọta ya na Sugarlove ma ọ bụ ndị nnọchi anya ya, ma ọ bụ na nke ọzọ maka ọrụ ahụ. . Sugarlove na-ekwuputa ikikere ọ bụla nke ire ire ahịa, mma maka otu ebumnuche, ma ọ bụ nke na-agaghị emebi emebi. Sugarlove anaghị enye gị ikike na iji ọrụ Sugarlove ga-adị nchebe, anaghị akwụsị akwụsị, enwere ya mgbe niile, ma ọ bụ na-enweghị njehie, ma ọ bụ ọ ga-egbo mkpa gị, ma ọ bụ na a ga-emezi mmezi ọ bụla na Ọrụ ahụ. Sugarlove na-egosipụta ibu nke, na enweghị nkwa ọ bụla enyere na aka gbasara ekwentị mkpuchi mkpuchi, nso, ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla na ọrụ ekwentị.
Na mmemme ọ bụla ga - akwụ ụgwọ Sugarlove (i) maka mmekpahụ ọ bụla, ihe ọghọm, ma ọ bụ mbibi ọ bụla (gụnyere, mana ọnweghị oke, mmebi maka data, ida mmemme, uru furu efu, ọnụ ahịa ị nweta ngwa ọrụ ma ọ bụ aka ọrụ nkwụsị) na-ebili n'iji ma ọ bụ enweghị ike iji Ọrụ Sugarlove, ọbụlagodi na Sugarlove ma ọ bụ ndị nnọchi anya ya ma ọ bụ ndị nnọchite anya mara ma ọ bụ na-adụ ọdụ na ụdị mmebi a ma ọ bụ (ii) nye onye ọzọ abụghị gị. Na agbanyeghị na ihe ọ bụla megidere ihe a dị, Sugarlove's. ị ga - akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị ihe a ga - eme, oge niile ka ị ga - amachi ego ị kwụrụ, ọ bụrụ na enwere, n'aka gị na Sugarlove maka Ọrụ ahụ n'oge oge ịnọ n’otu.
Na mgbakwunye, Sugarlove na-ewepụ ibu ọrụ niile, n'agbanyeghị ụdị ihe, maka omume ma ọ bụ nleghara anya nke ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ (gụnyere, mana ejedebeghị na ndị ọrụ na-akwadoghị, ma ọ bụ "ndị na-emebi") nke Ọrụ Sugarlove.
State site na Ụdị State
Ụkpụrụ ụfọdụ na-ejedebe itinye akwụkwọ ikike iji kwenye na njedebe nke ibu ọrụ ka ihe ndị a na-ekwu na ikike na njedebe nke ibu ọrụ nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
You kwenyere na iwu Florida (n'agbanyeghị esemokwu nke ụkpụrụ iwu) ga-achịkwa Nkwekọrịta a, na esemokwu ọ bụla nke na-esite na ma ọ bụ metụtara ya na nkwekọrịta a ga-adị n'okpuru ebe a na-anọpụ iche nke ụlọ ikpe etiti na nke steeti na steeti Florida, na nke ahụ ị na-edobere ikike na-enweghị isi nke ụlọ ikpe gọọmentị etiti na nke steeti na steeti Florida n'ihe metụtara Ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta a. Nkwekọrịta a, nke anabatara mgbe ịdenye aha maka Ọrụ Sugarlove, nwere nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na Sugarlove gbasara iji Ọrụ ahụ. Enwere ike ịmegharị nkwekọrịta a naanị ma ọ bụrụ na Sugarlove mara gị, ma ọ bụ ederede nke gị na onye ọrụ ikike nke Sugarlove bịanyere aka Ọ gwụla ma ekwuputaghị n'ụzọ doro anya, usoro ndị a ga-alanarị nkwụsị gị na Ọrụ gị. Ọ bụrụ na emeghị ndokwa ọ bụla na nkwekọrịta a ghara ịdị irè, ihe fọdụrụ na nkwekọrịta a ga-aga n'ihu na ike na nsonaazụ.
Sugarlove ga-eweghachite nkwụghachi n'ime elekere 72 nke ntinye aka izizi nyere na ọ nweghị ọrụ enyerela ya. Na agafee ọnọdụ ndị a, arịrịọ maka nkwụghachi ga-abụ naanị nha nke Sugarlove, a ga-enyocha ya na onye otu.
Nkwụsị nke Nrite akwukwọ maka Ịkwụsị na Ozi Kọntaktị maka Echere na Ịkwụ Ụgwọ Akwụsị:
Anyị ga-akwụsị ikike dịịrị onye ọrụ ọ bụla na-eji saịtị a iji ziga ọdịnaya nwebisiinka na-enweghị ikikere, nkwupute nkwenye, ezigbo ịgbachitere ma ọ bụ ịhapụ iji ya mee nke a. Karịsịa, ndị na-enyefe ọdịnaya onye ọrụ na saịtị a, ma isiokwu, ihe oyiyi, akụkọ, sọftụwia ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwebisiinka ga-ahụrịrị na ọdịnaya ha bulitere anaghị emebi ikike nwebiisinka ma ọ bụ ikike ndị ọzọ . Mgbe nkwenye ziri ezi sitere n'aka onye nwebisiinka ma ọ bụ onye nnọchite anya anyị, yana nkwenye site na iji ụlọ ikpe ma ọ bụ nnabata site n'aka onye ọrụ ahụ na o jirila saịtị a dị ka ihe ịda iwu na-ezighi ezi, anyị ga-akwụsị ikike ndị na-emebi iwu iji na /. ma ọ bụ banye na saiti a. Anyị nwekwara ike iji aka anyị kpebie ịkwụsị ikike onye ọrụ iji ma ọ bụ nweta saịtị ahụ tupu oge ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo okwukwe na ebubo agabigawo ebubo ahụ.